Ahoana ny fomba fiasa miaraka amin'ireo mpitondra ao amin'ny Photoshop amin'ny fomba matihanina? | Famoronana an-tserasera
Miaraha miasa amin'ny mpitondra ao amin'ny Photoshop Amin'ny fomba matihanina dia ilaina ny hahazoana vokatra tsara rehefa manonta antontan-taratasy ary na dia ny kinova nomerika aza amin'ny alàlan'ny fametrahana tsara ireo faritra fiarovana amin'ny fomba marina hisorohana ny lesoka amin'ny famakiana sy ny famitana.
Photoshop dia mamela antsika hametraka ny lalàna amin'ny fomba mandeha ho azy, ity dingana ity dia ampahany lehibe amin'ny fizotry ny famolavolana satria ny tetikasa sary dia tsy maintsy mahafeno masontsivana teknika fototra. Mianara miasa miaraka amin'ny Photoshop matihanina amin'ny fomba tsotra sy azo ampiharina.
Rehefa manomboka tetikasa sary dia ny zavatra voalohany tokony hatao dia mamorona ny antontan-taratasy voafaritra miaraka aminy ny endrika (habeny), aorian'io dia tsy maintsy asiantsika marika ny faritra mandeha rà (tapaho) ary ny faritra fiarovana ho an'ny lahatsoratra, ity ampahany ity dia tena ilaina mba hisorohana ny fatiantoka amin'ny fizotran'ny guillotining (fanapahana).
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny zavatra voalohany tokony hataontsika farito ny hasin'ny lalànay amin'ny Photoshop, Tsy mitovy ny miasa miaraka amin'ny pixel ho an'ny famolavolana nomerika fa tsy ny miasa miaraka amin'ny cm ho an'ny endrika pirinty.
Raha te hiditra amin'ity menio ity izay tsy maintsy ataontsika dia tsindrio ny tapany ambony amin'ny Photoshop ary tadiavo ny safidy "Prefers / Units and Rules."
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia misafidy singa metric liana amin'ny tetikasanay izahay, ny tena tsara dia ny fampiasana ny singa amin'ny piksel amin'ny tetikasa nomerika sy ny tetikasa vita pirinty ny singa amin'ny mm na cm.
Raha vantany vao voafaritra ny sandan'ny metric an'ny lalànay, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manomboka avoahy ny lalàna, azontsika atao amin'ny fomba roa izany: amin'ny tanana na amin'ny fomba mandeha ho azy.
Raha te hanao azy isika fomba tanana ny sisa ataontsika dia ny misintona ny lalàna amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ireo, rehefa manao izany isika dia afaka mahita ny halavirana ary mamaritra azy amin'ny safidintsika. Azo atao ny miafina ny lalànantsika, ahafahana manaisotra azy ireo dia manindry ny hitsin-dàlana: fifehezana + R (PC) na baiko + R (MAC).
Misy fomba marina kokoa rehefa miresaka miasa miaraka amin'ny mpitari-dalana, afaka mampiditra ny refy amin'ny tanana mba hialana amin'ireo lesoka mety hitranga izay mety hitranga amin'ny tanana.
Mba hametrahana ireo torolàlana amin'ity fomba faharoa ity, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia tsindrio ny menio top view / mpitari-dalana vaovao. Raha vantany vao tsindrio io safidy io dia hisokatra ny varavarankely vaovao ahafahantsika mametraka ny refy amin'ny fitsipika amin'ny alàlan'ny fanoratana ny sanda nomerika mitsivalana na mitsangana.
Misy fomba hafainganam-pandeha haingana kokoa aza hiasa amin'ireo mpitondra ao amin'ny Photoshop. Ity endrika farany ity dia ahafahantsika mametraka fitsipika marobe. Ity rafitra ity dia mety amin'ny fametrahana sisin-dàlana manerana ny antontan-taratasy sy ny faritra fiarovana mba hisorohana ny fatiantoka amin'ny fizotran'ny fanapahana.
Mba hahazoana ireo fitsipika ireo dia tsy maintsy tsindrio ny safidy "New guide composition", arahin'io dia hisokatra ny varavarankely vaovao ahafahantsika mametraka ny soatoavin'ny mpitari-dàlana mifanaraka amin'ny filantsika.
Raha mijery akaiky ny varavarankely vaovao isika dia mampiseho ny ampahany ho an'ny antontan-taratasy, Ilaina ity ampahany ity mba hametrahana haingana ireo sisin-tany fanapahana sy fiarovana satria hametraka azy rehetra amin'ny fotoana iray isika fa tsy tsirairay araka ny fomba hafa hitantsika teo aloha.
Raha vantany vao napetrakay ireo mpitari-dalana rehetra, dia manana ny antonta-taratasy vonona hanomboka hamolavola amin'ny fomba azo antoka sy matihanina izahay, manaja ireo faritra azo antoka mba hiantohana fa tsy hanana fatiantoka amin'ny famolavolana ny volavolantsika.
Ilaina ny mahafantatra ny sisin'ny fiarovana rehefa mamolavola, ireo sisin-tany ireo dia mety hiova arakaraka ny endrika izay hataontsika. Ny mahazatra sy manara-penitra indrindra dia ny fampiasana ny endrika kely toy ny carte, flyers, diptychs ... sns ra 5mm ho an'ny tapaka sy 4mm bebe kokoa ho an'ny faritra azo antoka amin'ny lahatsoratra. Noho izany dia tsy maintsy ajanontsika ny maridrefy 9mm hisorohana ny fatiantoka amin'ny fanapahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Miaraha miasa amin'ny mpitondra ao amin'ny Photoshop